राती साथीको कोठामा पुगेकि यी युवती, जस्ले कल्पना पनि गरिनन् यस्तो होला भन्ने ! – News Nepali Dainik
प्रकाशित मिति: आइतबार, फाल्गुण २३, २०७७ समय: ९:३०:२३
एक १९ वर्षकी कि’शोरीले दा’वी गरेकी छिन् कि जब उनी रा’तमा एक यु’वकको कोठामा गइन् त्यही बेला अ’चानक युवकका अन्य ११ जना साथीहरु आए र सबैले क’रणी गरे । घ’टना साइप्रसको हो,जहाँ बे’लायती क’शोरी एक सस्तो रिसोर्टमा बसेकी थिइन् । कि’शोरीले आफू एक युवकसँग को’ठामा भएको स्वीकार गरेकी छिन् ।
कि’शोरीको उ’जुरीपछि सबै १२ जना यु’वक वि’रुद्ध क’रणीको मु’द्दा च’लाइएको छ।आ’रोपी सबै यु’वकहरु इजरायलका हुन् । कि’शोरी का अनुसार ती युवकहरुले उनी बे’होस भएपछि मात्र छो’डेका थिए । कि’शोरीको श’रीरमा चो’टका कैयौं नि’शान पाइएका छन् ।
यो पनि पढ्नु होस:-महिलाले कस्ता पुरुषलाई मन पराउँछन् ?
एजेन्सी- महिला र पुरुषबीचको सम्बन्ध सुरुवातको समय निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । महिलाहरु सामान्यतया पुरुषमा केही न केही कुराहरु त खोज्छन् नै ।पुररुषको कस्तो स्वभाव भए महिलाहरु खुशी र सन्तुष्ट रहन्छन् त ? महिलाहरु पुरुषको तल उल्लेखित स्वभाव चाहन्छन् ।
कुनै पनि सम्बन्धको सुरुवात बाहिरी सुन्दरताबाट हेरिन्छ तर सम्बन्ध लम्बिँदै जाँदा मानिसको स्वभाव हेरिन्छ । खासमा सम्बन्धको आयु सुन्दरताले होइन स्वभावले निर्धारण गर्छ ।
एक महिलाले पुरुषबाट सबैभन्दा बढी अपेक्षा गर्ने भनेको राम्रो स्वभाव हो । लामो सम्बन्धमा महिलालाई सुन्दरताले भन्दा पुरुषको स्वभावले आकर्षित गर्छ ।
हुन त लामो सम्बन्धमा स्वभाव प्रधान हुन्छ तर आफ्नो पुरुषको आकर्षक लुक्स र व्यक्तित्व पनि महिलाको चहाना हो । पुरुषको स्किन कलरले समेत महिलालाई प्रभाव पार्ने गर्दछ ।
राम्रो लुक्स र पहिरन पछि महिलालाई चाहिन्छ हँसिलो अनुहार । कुनै पनि पुरुष हँसिलो अनुहारसहित प्रस्तुत हुन्छ भने उ प्रति महिला निकै आकर्षित हुन्छे।
Last Updated on: March 7th, 2021 at 9:30 am